Ijusi le-SEO Link elivela ku-YouTube
NgoLwesihlanu, Mashi 4, 2011 NgoMgqibelo, ngoMeyi 11, 2013 Nick Carter
Kade ngiba nempumelelo enkulu ngisebenzisa i-YouTube ukukhulisa ukubaluleka kwamakhasi okufika kwegama elithile elingukhiye. Kuyinkqubo elula futhi nansi indlela ehamba ngayo:
Dala ikhasi lokufika elinegama lakho elingukhiye ku-URL, ihlukaniswe ikhonco. Lokhu kusiza ama-bots ukuthi abuke amagama ngokuhlukile futhi ngakho-ke avume ukufaneleka kwakho kumusho oqonde kuwo. Ngalesi sibonelo, ngizosebenzisa http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
Dala ividiyo ozoyishumeka kuleli khasi lokufika. Ngokombono we-SEO, okuqukethwe kwevidiyo akunandaba nakancane ngoba sonke siyazi ukuthi ama-bots awakwazi ukukhasa ividiyo. Kepha, ngokubuka komuntu, qiniseka ukuthi ividiyo iyasebenza ngempela. Ngemuva kwakho konke, leli yikhasi esizobe sishayela kulo ithrafikhi.
Faka ividiyo ku-Youtube futhi sebenzisa igama lakho eliyisihluthulelo noma ibinzana njengesihloko sevidiyo. Isibonelo, ividiyo yami ibizwa ngokuthi, "I-Small Business CRM"
Ekugcineni, faka isixhumanisi sakho (http: // ifakiwe) encazelweni yevidiyo.
Lapho i-Youtube ishicilela le vidiyo, noma iyiphi intambo etholakele efana nephethini ye-URL, eqala nge-HTTP, ixhunywa ngokuzenzakalela kuleyo URL. Yilapho i-URL yekhasi lokufika uqobo ibalulekile ngoba awukwazi ukulawula umbhalo we-anchor ngokwakho, i-Youtube imane ixhumanisa ikheli. Ngakho-ke, ukuba negama lakho elingukhiye ku-URL iqinisekisa ukuthi umbhalo wehange uqukethe igama lakho eliyisihluthulelo. Isibonelo, bona i-URL exhunywe ku- leli khasi levidiyo le-Youtube.
Kepha lesi akusona isixhumanisi sokungalandeli? Impela kunjalo. Umaki wehange i-Youtube elisonga nge-URL yakho uzonikezwa imfanelo ye-rel = "no-follow". Qagela ukuthi yini: ubani okhathalelayo! Ngaphandle kokuthi izinga le-w3 lithi umaki wokungalandelwa kufanele usho ukuthini, idatha yomlando ingibonisile kaninginingi ukuthi lezi zixhumanisi okuthiwa azilandelwanga zisiza ukukhulisa ukuhambisana kwe-URL eqondisiwe. Noma kungasebenzi kangako kunesixhumanisi sokuthunyelwe, kuyasebenza.
Ngaphezu kwalokho, ithegi ye-H1 kuleli khasi, isihloko, iqukethe igama lakho eliyisihluthulelo. Ngakho-ke, unekhasi elihambisana negama lakho elingukhiye elixhumanisa nekhasi lakho lokufika ngombhalo wehange ohlanganiswe negama lakho elingukhiye. Kulula!
Okokugcina, kodwa okungenani, ukushumeka le vidiyo ekhasini lokufika lapho lixhunywe khona manje kuyisinyathelo sokugcina esibalulekile. Le vidiyo eshumekiwe itshela i-bot yakwa-Google ukuthi okuqukethwe yikhasi ngempela kuhambisana negama eliyisihluthulelo olifunayo. Kungani? Ngoba isihloko sevidiyo eshumekiwe siqukethe igama eliyisihluthulelo leli khasi elibhekise kulo. Ngenkathi ezinye izinto ezishumekiwe ezingafakwanga, ngiyaqiniseka ukuthi i-Google bot ibona into ye-Youtube futhi ifaka isihloko sevidiyo ku-algorithm yayo.
Imicabango yami ku-Google's “Panda” Algorithm Change
Mar 6, 2011 ku-6: 54 PM
Ngingenza isincomo esisodwa - beka isixhumanisi sakho ngaphambi kokuqukethwe kwakho kunokukuso. Abantu abaningi abanwebeki futhi bafunde konke ukufakwa kwencazelo ye-YouTube. Uzothola ukuthi uzokhuphula isilinganiso sakho sokuchofoza ngokubeka isixhumanisi kuqala.
Aug 8, 2011 ku-10: 01 AM
Hewu! Kuhle lokho! Bengingakwazi lokho! Kepha, nginombuzo: uma ubeka isixhumanisi kusayithi lakho ngemuva kokuphawula ngevidiyo, lokho kungaba kubi yini ebhizinisini lakho? Ngisho, ingabe i-google izojezisa isiza sami? uma kungenjalo, kungenzeka yini into embi?
Mar 7, 2011 ku-2: 24 AM
Ngaqala ukukwenza lokhu isikhathi esingaphezu kwenyanga edlule futhi bengilokhu ngithola imiphumela emihle yangempela hhayi eyami kuphela kodwa namakhasimende amaningana. ngiyabonga ngokukhipha imfihlo yami esikhwameni. I-LOL.
Mar 7, 2011 ku-7: 13 PM
Enye into ongayenza ukubhala okuqukethwe kwakho kwevidiyo. Lokhu kuzoyinika ithuba elingcono lokubonwa ngaphakathi kosesho lwe-YouTube futhi. Umngane wanginika amakhanda phezulu http://speakertext.com okuyinsizakalo ekwenzela umsebenzi omningi. Ngiyaqiniseka ukuthi ungafaka umbhalo obhaliwe ekhasini lokufika bese ukufihla ekubukweni komphakathi ngenkathi usiza izinga lekhasi lakho. Ulwazi oluhle namathiphu wokwenza okuqukethwe kwevidiyo empeleni kube kunokukubeka nje.
Mar 7, 2011 ku-7: 16 PM
Ulwazi olukhulu. Abantu abaningi abazi ukuthi ama-titling amavidiyo angabasiza kanjani. Futhi bheka ukubabhala ngensizakalo efana neSomlomo Umbhalo. Lokhu kukuvumela ukuthi uthumele umbhalo ku-YouTube owenza kube lula ukuthola okuqukethwe kwevidiyo yakho ku-YouTube uqobo. Ungahle uthathe umbhalo uwufake ekhasini lakho lokufika kepha uwufihle ekubukeni.
May 7, 2011 ku-3: 30 PM
Siyabonga ngokuthunyelwe okunolwazi kakhulu. Umbuzo wami kuphela ongaba ukuthi, kungani uphinda okuqukethwe kwevidiyo ekhasini lokufika? Abantu sebevele bakubonile ku-YouTube, kungani ungabi nokuqukethwe okuhlukile okuhambelana okufana namagama abalulekile esikhundleni salokho? Ngabe lokhu ngeke kuphumelele uma kungenjalo?
May 7, 2011 ku-4: 58 PM
Umbuzo omuhle. Kunezindlela ezimbili ababukeli abafinyelela ngazo ividiyo - eyodwa
izindlela zingaba ngokuseshwa kungxenyekazi yokubamba ividiyo njenge-YouTube,
noma ngabantu abakhomba ividiyo ku-YouTube. Noma kunjalo, ukubeka i-
ividiyo esizeni sakho izokwandisa lelo khasi ezinjini zokucinga futhi ibonakale
kubha yevidiyo ekhonjiswa ngokuzithandela kwimiphumela yosesho. Njengoba
kahle, uma unenethiwekhi enhle yezenhlalo ne-PR - uthumela ividiyo
okuqukethwe ekhasini lakho lokufika kungaheha ithrafikhi engaphezulu. Okokugcina,
kukhonjisiwe ezivivinyweni eziningi ukuthi ividiyo esekhasini lokufika ingakwazi
khuphula izinga lokuguqulwa. Ngivumelana nawe ngenhlonipho eyodwa -
qinisekisa ukuthi ividiyo esekhasini lakho lokufika ifanelekile kokuqukethwe
Lapho. Ukwenza kahle lokho!
Ichibi Lesifunda Lihamba
May 22, 2011 ku-10: 52 AM
Mangisho ukuthi i-athikili yakho engenhla iyiyona ebukeka kahle kakhulu futhi inolwazi kakhulu engiyifundile namuhla futhi ngifunde ezimbalwa kuma-You Tube hyperlinks. Ukuhlobana phakathi kwenjini yokusesha ividiyo eyodwa kanye nekhasi lewebhu lomnikazi elisanda kukhushulwa likhulu futhi akuvamile ukuthi lithathwe ngamanye amawebhusayithi "we-SEO" futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuhambisana kakhulu futhi kuyisiphetho esinengqondo kucebo lami lokumaketha. Ngiyabonga.
Mar 28, 2012 ku-4: 28 PM
Lokhu bekuyi-bud enkulu yokuthunyelwe.
Jun 10, 2012 ku-7: 00 PM
I-athikili enhle yokuxhumanisa kusuka ku-youtube, lokhu ngalezi zeluleko ze-seo
Nov 17, 2014 ngo-9: 32 AM
Ithiphu ethakazelisayo nokubonga ngokwabelana. Njengoba i-Google ilawula ukuseshwa okuningi okwenzeka ku-intanethi, ukuba nokuqukethwe okuthile nezixhumanisi kuzingxenyekazi zayo ezahlukahlukene kuyindlela eqinisekile yokuzuzisa wonke umphathi wewebhu noma i-blogger. Futhi ngomthamo omkhulu we-YouTube oyalela nsuku zonke ku-inthanethi, ayikho indawo engcono yokusebenzisa leli thuba lomgwaqo.
Jan 12, 2015 ngo-11: 09 PM
Okuthunyelwe okuhle, thanda okuqukethwe. Bengizibuza ukuthi ithini indikimba oyisebenzisayo, thanda ibha eseceleni ehlukanisayo. Ngicela ungithumelele isixhumanisi sakho sokuhambisana uma usitholile, ungathanda ukuthola isifanekiso kanye ne-plugin
Jan 13, 2015 ngo-3: 38 PM
Sisebenzisa i- I-Superfly Responsive WordPress WordPress Plugin iyatholakala kusuka kuCodecanyon. Ingqikithi iyitimu yangempela eyenziwe ngezifiso esisaqhubeka nokusebenza ukuyithuthukisa.
UJun 22, 2015 ngo-5: 43 AM
Ngeshwa, udinga ukuthola ividiyo eyenziwe ukwenza lokhu okungabiza kakhulu kunokukhangisa nje.
Jun 22, 2015 ku-10: 45 PM
Ngingafaka ividiyo mahhala ku-iPhone yami! Cha?
Isitolo se-E-Liquid UK
Jun 26, 2015 ku-9: 50 PM
Awukaze uzwe ngeFiverr?
Okuthunyelwe okuhle, by the way, i-YouTube iyisetshenziswa esihle kakhulu sezixhumanisi nokwazisa.
Dec 29, 2015 ngo-5: 58 PM
I-athikili enhle! Ngidinga nakanjani ukuyihlola.